Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. दशैँमा हवाई टिकटको मूल्यवृद्धिले सर्बसाधारण मारमा – Emountain TV
दशैँमा हवाई टिकटको मूल्यवृद्धिले सर्बसाधारण मारमा
काठमाडौं, १८ असोज । नेपालीहरुको महान चाड दशैँलाई लक्षित गरि काठमाडौं उपत्यका भएर यात्रुहरु बाहिरने क्रम बढिरहेको छ । सवारी साधनको प्रयोग गरि करिब २० लाख भन्दा बढि यात्रुहरुले काठमाण्डौ उपत्यका छाडिसकेका छन् । सडक यातायातको अलावा हवाई यातायात सेवा मार्फत उपत्यका बाहिरिनेको संख्या पनि उत्तिकै बाक्लो छ ।
हवाई सेवाको प्रयोग गरि काठमाण्डौ उपत्यकाबाट बाहिरिने यात्रुहरुको विमानस्थलमा निकै चाप देख्न सकिन्छ । दशै लक्षित गरि विदेशबाट नेपाल पर्किएका तथा टाढाको गन्तव्य भएका कारण विमानस्थलमा चाप देखिन्छ । सवारी साधनमा जान असहज भएकाहरु बाध्यतावश विमानस्थलमा महँगो मूल्य तिरेरै जाने यात्रुहरुको चाप देख्न सकिन्छ । यात्रुहरुको यो अवस्थामा एअरलाइन्स कम्पनीहरुले भने कमाउने माध्यम बनाएको यात्रुहरुले गुनासो गरेका छन् ।
निजि क्षेत्रको बुद्ध एअरलाईन्सले त्यस्तो नभएको र एभाइएवल फेयरमै उडान भरिरहेको बताउँछ । यो समयमा आउने भन्दा जाने यात्रुहरुको चाप बढि भएका कारण पनि हवाई टिकटको मुल्य एभाइएवल फेयरमै केहि बढि भएको बुद्ध एअरको दावी छ ।
मूल्यमा स्थिरता नरहेको र एभाएवल फेयरको नाममा अत्यावस्यक समयलाई प्रयोग गरिने गरेको निजि क्षेत्रकै अर्को हवाई सेवा सौर्य एअरलाईन्स प्रयोग गरि काठमाण्डौबाट भैरहवा जानलागेका सविन भट्टराई बताउँछन् ।
सत्तरी बर्षमाथिका बृद्धबृद्धालाई हवाई टिकटमा ५० प्रतिशत छुट गर्ने सरकारको निर्णय पूर्व तयारी विनै गरिएको जस्तो देखिएको छ । टिकट लिन बृद्धबृद्धा आफ्नो परिचयपत्र लिई टिकट काउण्टरमै जानुपर्ने बाध्यताले बृद्धबृद्धालाई असहज परिस्थिति सिर्जना गराईदिएको छ ।
निजी क्षेत्रका एअरलाईन्ससँग आन्तरिक हवाई उडानमा सकेत प्रतिस्पर्धी बन्न नसकेको नेपाल एअरलाईन्स समेत यो समयमा भने उच्च हवाई फेयर सहितको उडान भरिरहेको बताउँछ ।
दशैं जस्तो महत्वपूर्ण चाडमा घर जान चाहने यात्रुलाई अप्ठ्यारो परेको समयमा फाइदा उठाउँदै एअरलाइन्सहरुले टिकटको मुल्यमा गरेको बृद्धिले सर्बसाधारण थप मारमा परेका छन् ।